Goobaha Dalxiiska ee Curacao Sandals® waxay diyaar u yihiin jaaleyaal leh $ 1000 maroojin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Curacao Breaking News » Goobaha Dalxiiska ee Curacao Sandals® waxay diyaar u yihiin jaaleyaal leh $ 1000 maroojin
Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Curacao Breaking News • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dalxiisku wuxuu u bilaabmayaa sida Sandals Royal Curaçao, wuxuu bixiyaa kayd waqti-xaddidan ah wuxuuna daaha ka qaadayaa qorshayaal dhowr Sandals “Firsts” ah.
Halkan, lamaanayaashu waxay ku ogaan doonaan quruxda iyo kala duwanaanshaha juqraafiyeed ee Curaçao, oo caan ku ah dhulkeeda xiisaha leh, xeebaha qaaliga ah, godadka dhagaxa ah iyo caasimad firfircoon Willemstad, oo ah UNESCO World Heritage Site.
Waxay ku yaalliin 44 hektar gudaha Santa Barbara hantida gaarka loo leeyahay, oo ah 3,000-acre oo ilaalin ah oo gaar ah, Sandals Royal Curacao waxay si dhab ah u dhexgalin doontaa yaababka adduunka dabiiciga ah - lamadegaanka, badda, buuraha, iyo xeebta - oo leh khibrad dalxiis. Halkaan, lamaanayaashu waxay ku ogaan doonaan quruxda iyo kala duwanaanshaha juqraafiyeedka Curaçao, oo caan ku ah dhulkeeda xiisaha leh, xeebaha qaaliga ah, godadka dhagaxa leh iyo caasimad firfircoon Willemstad, oo ah goob dhaxalgal ah oo UNESCO ah, iyagoo weli ku mashquulsan Raaxada Ku Jirta® Fasax waayo -aragnimada Sandals Resorts ayaa caan ku ah.
Sandals Royal Curaçao oo ku habboon in la furo Abriil 14, 2022 ayaa ku habboon meel 15 mayl u jirta garoonka diyaaradaha. Mawqifkeeda xiisaha leh ee dhinaca galbeed ayaa soo jiidanaysa soo jiidashada mid ka mid ah qorrax-dhaca ugu xiisaha badan ee Kariibiyaanka, oo martida siisa daawayn muuqaal ah. Iyada oo leh 351-qol oo raaxo leh iyo suuliyo ka kooban 24 qol, Sandals Royal Curaçao waxay yeelan doontaa ikhtiyaarro raaxo leh oo loo dhan yahay si ka badan sidii hore, oo ay ku jiraan laba qaybood oo saxiise cusub ah, Awa Seaside Butler Bungalows iyo Kurason Island Poolside Butler Bungalows, oo dhammaystiran Tubs ™, barkado gaar loo leeyahay, adeegga qawweeyaha, iyo isboorti iyo qaab -dhismeed MINI Coopers oo beddeli kara ayaa mudan in martidu ay kaxeeyaan inta ay sahaminayaan jasiiradda.
Meesha Helitaanka & Sahaminta
Guddoomiyaha Fulinta ee SRI, Adam Stewart, wuxuu leeyahay marka laga reebo meesha cusub ee loo socdo, baaxadda baaxadda leh ee gaarka loo leeyahay ee ku xeeran Sandals Royal Curaçao waxay u oggolaan doontaa soo -booqashada martida cusub. “Sandals Royal Curaçao, martidu waxay sidoo kale awoodi doonaan inay lugeeyaan, baaskiil ka qaataan oo soo qaataan dambiisha cuntada lagu cuno si ay u shidaan maalmaha ogaanshaha iyo sahaminta. Jaceyl saafi ah. Waxayna sii wadi karaan ruuxaas xiisaha badan ee ka baxsan albaabadeena halkaas oo ay ka heli doonaan meel heer caalami ah oo ay ku yaalliin makhaayado waawayn, dadka maxalliga ah ee xiisaha leh, farshaxanka wanaagsan, iyo booqdayaasha adduunka oo dhan. Waxaan gelinay $ 72 milyan oo dheeraad ah hagaajin iyo hagaajin si aan u dhammaystirno hannaanka “Sandalization” ee hantidan horeba u yaabka lahayd, mana sugi karno in martidayadu ay ka cabsadaan, ”ayuu yiri Stewart.
Sandals Royal Curaçao waxay hoy u noqon doontaa barkadda ugu horreysa ee Dos Awa oo leh aragtiyo ka soo horjeeda badda iyo muuqaalka buuraha dhaadheer, iyo Duchess, makhaayadda iyo baarkii ugu horreeyey ee sabaynaya ee Sandals, oo laga dhisay 92 markab oo Dutch ah oo dhab ah. Iyada oo leh sagaal makhaayadood oo ah 5-Star Global Gourmet ™ (sideed ka mid ahi waa cusub yihiin oo u gaar yihiin Sandals Royal Curaçao), martidu waxay ka dhadhamin doonaan dhadhanka caalamiga ah dheri dhalaalaya ee cunnada caalamiga ah, oo ay ku jiraan khamri dhab ah iyo bar farmaajo Dutch ah. Lammaanayaashu waxay sidoo kale ku cashayn karaan socodkooda saddexda baabuur ee cuntooyinka cuntada lagu kariyo ee xeebta ku yaal oo bixiya qiimaha dhaqanka Curaçao, tapas Isbaanish ah, iyo isku-darka Aasiya, ama cabbitaan ku qabta mid kasta oo ka mid ah 10ka baararka gaarka ah.
Sandals Royal Curaçao waxay sii wadi doontaa sumcadda astaanta inay tahay awood xagga jaceylka ah oo leh saddex goobood oo aroosyada badda xeebta ah. Meesha loo dalxiis tago ayaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa Red Lane® Spa oo raaxo leh oo leh lix cabanas spa oo bannaanka ah iyo qolal daaweyn; barkadaha fidsan; helitaanka koorsada golf-ka ee horyaalnimada 18-dalool ee Pete Dye; 38,000-square-feet oo ah goob lagu kulmo gudaha iyo dibaddaba, tan ugu weyn jasiiradda; laba marin-ku-yaal goobta ah iyo 70 goobo quusitaan ah, oo ku habboon martida raadineysa inay ku biiraan in ka badan 100,000 oo quusayaal ah oo ku kasbaday shahaadada PADI® iyada oo loo sii marayo shirkadda dalxiiska.
Diyaar u ah, Deji, Iibiya
Sida laga soo xigtay Gary Sadler, Madaxweyne Ku -xigeenka Fulinta, Iibka Global & Xiriirka Warshadaha ee Fasaxyada Gaarka ah Inc. (UVI), oo xiriir la leh wakiilka caalamiga ah ee Sandals Resorts, martida u ballansan Sandals Royal Curaçao hadda illaa Noofambar 2, 2021, hel dalab gaar ah oo Furitaan Weyn oo kayd ah ilaa $ 1,000. Sandals -ka Xulashada Abaalmarinta Martida ayaa sidoo kale la wadaagi doona kaydkan waxayna heli karaan gunno gaar ah oo dheeri ah iyaga oo dooranaya $ 200 Routes Island Routes Tour, $ 200 Red Lane® Spa credit, 5,000 Sandals Instant Select Abaalmarinta Daacadnimada Abaalmarinta, ama PADI® Discover Scuba laba (qiimihii $ 200) marka aad ballansanayso joogitaan oo ah lix habeen ama ka badan maanta ilaa Ogosto 5, 2021. tamar aan la soo koobi karin. Waxaan hubnaa in shuraakadayada ay jeclaan doonaan iibinta hoteelkan, ”ayuu yiri Sadler.
Heerarka horudhaca ah ee Sandals Royal Curaçao waxay ka bilaabmaan $ 341 qofkiiba, habeenkiiba, iyo sicirka qaybta qaalliyuhu wuxuu ka bilaabmaa $ 538 qofkiiba, habeenkiiba, iyadoo lagu saleynayo deggenaanshaha labanlaabka ah iyo joogitaanka toddobada habeen. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo www.sandal.com. Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan waxa aad filan karto inta aad joogto Sandals Royal Curaçao, akhri balooggan halkan: https://www.sandals.com/blog/curacao-sandals-latest-destination/.
Sandals Resorts waxay bixisaa laba qof oo jacaylka ugu jaceyl badan, waayo -aragnimada fasaxa ee Luxury Include® ee Kariibiyaanka. Iyada oo leh 16 goobood oo xeeb leh oo qurux badan oo ku yaal Jamaica, Antigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, Grenada, iyo Curaçao oo la furayo Abriil 14, 2022, Sandals Resorts waxay bixisaa ka -soo -baxyo tayo leh oo ka badan kuwa kale ee dalxiiska ee meeraha. Saxiixa Love Nest Butler Suites® ee ugu dambayn asturnaanta iyo adeegga; butlers oo ay tababartay Guild of Professional English Butlers; Red Lane Spa®; 5-Xiddigta Gourmet Global ™ cunista, hubinta khamriga dusha sare, khamriga qaaliga ah, iyo maqaayadaha qaaska ah ee cuntada leh; Xarumaha Aqua oo leh aqoonsi iyo tababar PADI® oo khabiir ah; Wi-Fi dhakhso leh xeebta ilaa qolka jiifka iyo Sandals Aroosyada la-habeyn karo waa dhammaan kuwa kabaha Sandals-ka. Resorts Sandals waxay u dammaanad qaadaysaa martida nabada maskaxda laga bilaabo imaanshaha ilaa bixitaanka Borotokoollada Platinum Sandals ee Nadaafadda, Tallaabooyinka caafimaadka iyo nabadgelyada ee shirkadda ee kor loo qaaday ee loogu talagalay in lagu siiyo martida kalsoonida ugu weyn markay ku nasanayaan Kariibiyaanka. Dalxiisyada Sandals waa qeyb ka mid ah qoysaska ay leeyihiin Sandals Resorts International (SRI), oo uu aasaasay Gordon “Butch” Stewart, oo ay ku jiraan Xeebaha Dalxiisyada iyo waa shirkadda hoggaamineed ee dhammaan dalxiiska Caribbean-ka. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Sandals Resorts Luxury Included® farqiga u dhexeeya, booqo www.sandal.com.